Guddoomiyaha Maxkamadda sare oo shir muhiim ah Baydhabo ka furay. | Somali National Television - sntv.so
Home WARARKA MAANTA Guddoomiyaha Maxkamadda sare oo shir muhiim ah Baydhabo ka furay.
Guddoomiyaha Maxkamadda sare oo shir muhiim ah Baydhabo ka furay.
Guddoomiyaha maxkamadda sare ee dalka mudane Baashe Yuusuf Axmed ayaa maanta magaalada Baydhabo ka furay shirweynaha qaran ee xeer-ilaaliyaasha dowlad goboleedyada, iyadoo uu ka qayb galayo shirkaasi xeer ilaaliyaha guud ee Qaranka Dr Axmed Cali Daahir.
Shirkan oo ah kii labaad ee xeer ilaaliyaashu yeeshaan ayaa diiradda lagu saari doonaa dhowr qodob oo ay ka mid yihiin wada shaqeynta xeer ilaalinta heer Qaran iyo dowlad-goboleed, dhowrista madax banaannida xeer ilaalinta iyo in la dhiso ururka xeer ilaaliyayaasha.
Guddoomiyaha maxkamadda sare ee dalka mudane Baashe Yuusuf Axmed oo furay shirka ayaa si qota dheer uga hadlay muhiimadda xeer ilaalinta u leedahay sharciyada dalka, waxaana uu bogaadiyay shirkan maanta furmay iyo muhiimadda uu leeyahay isagoo kula dardaarmay dhinacyada inay si wanaagsan uga doodaan.
Previous articleWasiir Beyle “sanadda 2020-ka waxaan rajaynaynaa in deynta cafinta soo gabagabowdo.
Next articleMadaxweynaha Jamhuuriyadda oo saxiixay sharciga dhismaha guddiyada madaxa bannaan ee musuq-maasuqa.